Qaramada Midoobay Oo Amaro Culus Oo Falcelin U Muuqda Ku Soo Rogtay Shaqaalaheeda Muqdisho | Berberatoday.com
Qaramada Midoobay Oo Amaro Culus Oo Falcelin U Muuqda Ku Soo Rogtay Shaqaalaheeda Muqdisho
Moqdisho(Berberatoday.com)-Qarammada Midoobay ayaa ku dhawaaqday inay yareynayso shaqaalaheeda ka jooga Soomaaliya, kadib markii Hoobiye lagu weeraray 1-dii bishan xaruntoodii Magaalada Muqdisho, halkaasi oo ay ku dhaawacmeen 3 xubnood u shaqeynayey iyo qandaraasleyaal la shaqeeyaba.
Qarammada Midoobay waxay xaqiijiyeen in masuuliyiintii loo xilsaaray dhacdadii weerarku ay go’aamiyeen in la xaddido shaqaalaha ka jooga Muqdisho.
Waxa kaloo ay Qarammada Midoobay tilmaantay in hawl-wadeenno lagu waday inay Axadii maanta tagaan Muqdisho lagu war-geliyey inay si ku meel-gaadh ah iskaga joogaan Nairobi ee dalka Kenya, sidoo kale hawlwadeenno kale oo ay u qorsheysnayd inay Isniinta beri u safraan Muqdisho ayaa iyagana la faray inay iska sii joogaan Nairobi.
Tallaabadan ayaa ka dambeysay markii ay soo baxeen tuhun la xidhiidha in dawladda itaalka daran ee Soomaaliya ay ka dambeyso weerarka lagu bartilmaameedsaday xarunta UN-ka ee Muqdisho.
Waxa kaloo walaacan dhaliyey in isla maalintii la weeraray xafiiskooda ay dawladda Soomaaliya soo saartay go’aankii ay dalkaas qalalaasuhu hadheeyey ka mastaafurisay Wakiilkii Qarammada midoobay Nicholas Haysom